Al-Shabaab oo fagaaro ku toogtay rag ay ku Eedeeyeen la Shaqeynta Dowladda | Dalka Times - News and Politics
Home LOCAL Al-Shabaab oo fagaaro ku toogtay rag ay ku Eedeeyeen la Shaqeynta Dowladda
Al-Shabaab oo fagaaro ku toogtay rag ay ku Eedeeyeen la Shaqeynta Dowladda
Falkan toogasho ah ayaa Al-Shabaab waxaa ay ka fuliyeen fagaaro ku yaalla deegaanka Xagar ee gobolka Jubbada Hoose,waxaana ay ku fuliyeen 5 Rag ah oo ay ku Eedeeyeen inay la Shaqeeynayeen Dowladda Federaalka iyo Dowladaha taageera.
1: Cusmaan Cabdulle Cabdullaahi ( Buulle), iyaga oo ku eedeeyay in uu la Shaqeynayay Ciidamada Bangaraafta oo ka mid ah Ciidamada xooga dalka ee uu tababaray Mareykanka.
2: Cabdi kariim Muuumin Axmed oo lagu eedeeyay in uu u Shaqeynayay Hay’adaha sirdoonka Soomaaliya gaar ahaan kuwa loo yaqaano PS.
3: Xasan Barre Isxaaq (Jiiroow Barroow) ayaa Al-Shabaab waxaa ay ku eedeeyeen in uu la Shaqeynayay Dowladda Kenya oo Ciidamo ku howlgalla Magaca AMISOM ee xilligaan ka joogaan Gudaha dalka Soomaaliya.
4: Cumar Xasan Axmed (Cumar Cuuke) ayaa lagu eedeeyay in uu l Shaqeynayay Hay’daha Sirdoonka Mareykanka gaar ahaan CIA-da.
5: Axmed Cabdullaahi Warsame oo ay ku eedeeyeen in uu l Shaqeynayay Hay’daha Sirdoonka Mareykanka gaar ahaan CIA-da.
Si kastaba Al-Shababa ayaa inta badan deegaanada ay maamulaan waxaa xukuno dil ah ku fuliyaan dad ay ku eedeeyaan inay la Shaqeeyaan Dowladda Federaalka iyo Hay’adaha ka socda Dowladaha taageeraa Dowladda Soomaaliya.